Muuse Biixi Maxaa ka baajiyey Safarkii uu ku tagi lahaa SWEDEN ? | Saadaal Media
Muuse Biixi Maxaa ka baajiyey Safarkii uu ku tagi lahaa SWEDEN ?
Waxaa dhowaan soo baxay Warar sheegaya inuu Madaxwaynaha Somaliland gaadhi doono dalka Sweden halkaasi oo uu kaga Qayb geli lahaa, Shir uu Xisbi dalkaasi ka dhisan Qabsan lahaa, Waxaa sidoo kale la sheegay inuu ka hadli lahaa sida Somaliland ay ku heshay nabadda iyada oo ku taala gobol colaado badan ay ka jiraan.
Balse waxaa isbadal ku yimid oo baaqday Safarkii biixi ku tagi lahaa Sweden, iyadoo ay Jireen Dad badan oo isku diyaarinayey inay Banaanbaxyo kala hor tagaan, Islamarkaana Madaxwayne Biixi ku eedaynaya dhibaatooyin kala duwan.
Dhinaca kale Dowladda Sweden iyo DF Soomaaliya ayaan ka Warqabin Safarka, waxaana Labada dhinac beeniyeen inay ka warhayeen socdaalka madaxweyne Biixi ku tagi lahaa Stockholm, waxaana hadda baaqday safarka Muuse Biixi Cabdi ee magaaladaasi.
Wafdi uu hoggaaminayo Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland ayaa la filayaa in ay ka qeybgalaan kulankaas waxaana baaqday safarkii uu Muuse Biixi uga qeybgeli lahaa iyada oo aan si rasmi ah loo shaacin in baajinta safarkaas wuxuu salka ku hayo.